China Digital hamandoana fanaraha-maso Pen miasa amin'ny MC88 hoditra famakafakana fanamboarana sy ny orinasa | Meicet
Digital Moisture Monitor Pen dia miasa miaraka amin'ny fanadihadiana amin'ny hoditra MC88
Toetoetra: Mampiasa ny haitao Bio-Sensor mitarika an'izao tontolo izao
Mahatsara azy: Fahamarinana avo ； Fandinihana be saro-pady; fiasa iray mikasika, Mora ampiasaina
Fanaraha-maso hamandoana nomerika ho an'ny hoditra
Ity Meter Digital Moisture Meter ity no fitaovana mety handrefesana ny hamandoana amin'ny hoditrao. Ity fitaovana madiodio ity dia mampiasa ny teknolojia Bioelectric Impedance Analysis (BIA) farany, fomba fandrefesana tsy miteraka famakiana amin'ny fotoana marina mba hanampiana anao hanara-maso ny hidiran'ny hoditrao mba hitazonana hoditra tanora sy salama. Ho fanampin'izany, ity vokatra mahatalanjona ity dia nosedraina araky ny torolàlana sy fenitra iraisam-pirenena eropeana.
Digital Monitor Moisture Monitor dia azo ampiasaina ho fitaovam-barotra ho an'ny hatsaran-tarehy na haingon-tarehy hatsaran-tarehy. Tsara ho an'ny trano, fitsangatsanganana, salon hatsaran-tarehy ary hopitaly matihanina
Fanadihadiana saro-pady misy fahamendrehana avo lenta, araho tsara ny hamandoana sy ny diloilon'ny hoditrao.
Fandidiana tsotra sy lanja maivana entina. Alefaso fotsiny rehefa avy nampifandray ilay voatendryMC88 Famakafakana ny hoditra, kitiho ny fizahana amin'ny hoditrao ary jereo ny toetoetran'ny tena rano, ny isan-jaton'ny solika amin'ny fampisehoana Ipad mora vakina.
Humidity tena izy
Latsaky ny 70%
Hydration (0-99.9%), fihenjanan'ny resaoro (0-9.9), Solika (5-50%)
* 115 * 30 22mm
Metera hamandoana hoditra
Sombiny momba ny vokatra vita amin'ny metaly ho an'ny hoditra
Previous: Mpanadihady amin'ny hoditra matihanina Loko volamena ho an'ny spa tarehy
Manaraka: Cross Polarized UV Lighting Facial Skin Analyzer ho an'ny toeram-pitsaboana hoditra
Mpanadihady momba ny hoditra matihanina Loko volamena ho an'ny tarehy ...